Maro loatra ny entana hafarana eto Madagasikara noho ny ahondrana ka antony voalohany indrindra mbola mahatara antsika amin’ny fampandrosoana ara-barotra sy ny toe-karena. Sakana mahatonga izany ny tsy fahalalan’ireo mpandraharaha ara-barotra ny fenitra iraisam-pirenena izay takiana amin’ny fanondranana entana, eo ihany koa ireo dingana maro tokony arahina.
Nahitana fivoarana kosa anefa i Madagasikara raha ny lafiny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy amin’ny minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra. Raha tsy hiteny fotsiny afa tsy i Chine ohatra izay efa vonona ny handray ny vokatra avy eto Madagasikara.
Tanjona ny fametrahana fitaovana ahafahana mampandroso ny toe-karena eto Madagasikara, indrindra ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena, hoy hatrany ny fanazavana. Nisokatra omaly ihany koa ny seminera izay hanomezana fampiofanana ireo tanora sy mpandraharaha ara-barotra mikasika ny fifandraisana ara-barotra amin’ireo firenena any ivelany. Fampiofanana izay tarihin’ny OMC na ny Organisation Mondial du Commerce.